Maaliyadda MMJ Oo Laga Qaaday Masuul Ku Takhasusay Maaliyada Loona Magacaabay Wiil Diploma Nurse Ah - Jigjiga Online
HomeSomalidaMaaliyadda MMJ Oo Laga Qaaday Masuul Ku Takhasusay Maaliyada Loona Magacaabay Wiil Diploma Nurse Ah
Maaliyadda MMJ Oo Laga Qaaday Masuul Ku Takhasusay Maaliyada Loona Magacaabay Wiil Diploma Nurse Ah
Jigjiga (JO) – Wasiirka Xafiiska maamulka ee Dawladda Deegaanka Soomaalida, Xasan Maxamed Xuseen (Xasan Daadhi) ayaa xilkii ka qaaday Madaxii Maaliyadda ee Magaalada Jigjiga, Muxiyadiin Cali Biyo oo muddo dheer kasoo shaqeeyey xafiisyo maaliyadaha ah oo gobollo kala duwan ah.
Wareegto uu soo saaray Wasiirka Xafiika Maamulka ayaa lagu sheegay in xilkii laga qaaday Madaxii maaliyadda ee Jigjiga, waxaana loo magacaabay masuul cusub oo aan hore uga soo shaqaynin xafiisyo maaliyadeed.
Wareegtadan oo ogeysiin lagu siiyey Madaxweynaha Deegaanka, Wasiirka Xafiiska Maaliyadda iyo Xafiisyo kale, waxa lagu sheegay in xilka laga qaaday Muxiyadiin Cali Biyo loo magacaabay wiil dhallinyaro ah oo lagu magacaabo Cabdi Muuse oo aan hore usoo qabanin shaqooyin sidan u culus.
Sida ay Jigjiga Online u xaqiijiyeen ilo wareedyo lagu kalsoon yahay, Masuulka hore ee xilka laga qaaday ayaan loo sheegin sababta kelliftay in shaqada laga wareejiyo, laakiin kaliya lagu wargeliyey inay sunnaha shaqada tahay in marba ciddii loo garto loo dhiibo.
Warku wuxuu intaa ku daray in Cabdi Muuse oo hore uga shaqayn jiray Xafiiska Xisbiga oo aqoontiisu tahay Diploma Nurse ah uu laga bilaabo maanta ahaanayo Madaxa Maaliyadda ee Jigjiga, halkaas oo sida la sheegayo lagu geeyey weji iyo garab uu ka haysto Wasiirka Xafiiska Maamulka iyo Mayarka Magaalada Jigjiga.
Masuulka hore ee xilka laga qaaday ayaa takhasuska shahaadada labaad ku sameeyey cilmiga dhaqaalaha iyo xisaabaadka, waxaanu 15kii sannadood ee ugu dambeeyey kasoo shaqeeyey degmooyin iyo gobollo kala duwan.
“Laasim Meelo Badan Oo Galdaloollo Ahi Way Jiraan; Dad Dhiigyo Cab Ah, Dadka Laaya Oo Odayaasha Dhirbaaxa” Madaxweyne Mustafe